Momba anay - China Construction Machinery Co., Ltd.
Shina Fanamboarana Machines Co., Ltd.
China Construction Machinery Co., Ltd. dia manana tantara nandritra ny 30 taona mahery ary mifandraika amin'ny vondrona china lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny milina, orinasa indostrian'ny milina nasionaly china, izay SINOMACH.
Ny orinasanay dia orinasam-pamokarana matihanina feno. Izahay dia manolo-tena indrindra amin'ireto orinasa manaraka ireto: manolotra mpanjifa anatiny sy avy any ivelany milina mandroso sy fitaovana feno amin'ny milina fananganana, manome serivisy lozisialy "isan-trano" sy serivisy fanamboarana milina fanamboarana.
Mifantoha amin'ny mpanjifa, ny kalitao sy ny lazany, ny fampandrosoana marina ary ny fampandrosoana vaovao
Omeo ny vokatra sy serivisy tsara indrindra ho an'ny namana amin'ny lafim-piainana rehetra any an-trano sy any ivelany
Ekipa matihanina antonony sy efa zokinjokiny manana traikefa ara-teknika sy ara-teknika
CNCMC —FITSIPIKA VOALOHANY
Ny fahaizantsika mahazatra sy ifotony dia ny fahaizana manome vokatra sy serivisy fampiroboroboana tokana sy fitantanana fampidirana rojom-bolo manerantany. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, dia efa nanolotra karazana milina feno sy serivisy aorian'ny fivarotana ho an'ny tetikasa marobe eto Afrika sy ny firenena fehikibo sy arabe izahay. Manana ekipa ahitana mpiasa antonony sy zokiolona izay matihanina sy mahay amin'ny marketing sy teknika, miaraka amin'ny fampandrosoana sy fanitarana an-taonany maro, ny CNCMC dia efa nametraka fifandraisana malalaka sy mafy orina sy fiaraha-miasa amin'ireo mpanamboatra malaza sy andrimpanjakana fikarohana siantifika amin'ny indostrian'ny milina fananganana na an-trano sy any ivelany .
Manaraka ny fitsipiny ny CNCMC: mifantoka amin'ny mpanjifa, kalitao ary trosa, mivoatra amin'ny zava-misy ary mandroso amin'ny famoronana. Izahay dia maniry mafy ny hametraka fiaraha-miasa amin'ny endrika isan-karazany miaraka amin'ireo orinasa an-toerana sy iraisam-pirenena ary mpamokatra eo amin'ny sehatry ny toekarena, teknolojia ary varotra ary hanome ny sakaizanay sy iraisam-pirenena an'ireo faribolana rehetra ireo vokatra sy serivisy tsara indrindra.